ब्रोकोली र ह्यामको साथ म्याकारोनी - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
पास्ता52 मिनेट4 व्यक्ति
यो रेसिपी एक आविष्कारको एक बिट भयो, सामग्रीहरू जुन मैले मेरो फ्रिजमा फेला पारेको छु। म पनि केहि प्रकाश चाहान्छु, त्यसैले जो गरिरहेका छन् आहार, यो नुस्खा शानदार छ।
मलाई यो धेरै मन पर्यो किनकि यो धेरै छ रसदार र यो केहि खाने को लागी एक राम्रो तरिका हो भर्डुरा। र, निस्सन्देह, यदि तपाइँ आहारमा हुनुहुन्न भने तपाइँ यसलाई तपाइँको स्वादमा अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ, उदाहरणका लागि बेकनको लागि योर्क ह्याम परिवर्तन गर्ने र बेचेमेलमा मक्खन थप्ने।
1 ब्रोकोली र ह्यामको साथ म्याकारोनी
एक स्वादिष्ट नुस्खा जहाँ पास्ता ब्रोकली र बचेमल सॉससँग मिल्दछ।
400 ग्राम मकारोनी
ब्रोकली को 200०० ग्राम
साना क्युब्समा यर्कको हेमको g०० ग्राम
१००० ग्राम अर्ध-स्किम्ड दुध
हामीले गिलासमा राख्यौं, नुन र तेलले पानी। हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १।
जब हामीले ब्रोकोलीलाई फ्लोरेटहरूमा काट्छौं र हामी तिनीहरूलाई भेरोमा कन्टेनरमा राख्छौं। हामी गिलास र कार्यक्रममा वारोमा राख्छौं २ मिनेट, वेग १, भेरोमा तापमान।
अर्को, हामी कप र कार्यक्रमको मुखबाट पास्ता थप्छौं समय यसको प्याकेज, १००º, चम्चा गतिमा दर्साइएको छ। हामीले माथि भेरोमा कन्टेनर राख्यौं।
जब समय सकियो, हामी जाँच गर्छौं कि पास्ता सकियो।
हामी वारोमा कन्टेनर हटाउँछौं र पास्ता निकाल्छौं (हामी टोकरी प्रयोग गर्न सक्छौं)। हामी यसलाई बेकिंग डिशमा राख्छौं, थोरै नुन र तेलको एक थोपा थप्नुहोस् र ओरेगानो छर्काउनुहोस्। हामी राम्ररी हलचल। ब्रोकोली टुक्रा र योर्क ह्याम क्यूब्स संग शीर्ष। हामी हटाउँछौं।
हामी ओभनलाई २००º तातो माथि र तल प्रिसिट गर्छौं।
सिसा नधोई हामी बेकमेल बनाउँदछौं। हामी तेल र कार्यक्रम थप्छौं १ मिनेट, भेरोमा तापमान, गति १।
त्यसपछि हामी पीठो र कार्यक्रम थप्छौं Minutes मिनेट, भेरोमा तापमान, गति २।
हामी दूध, काली मिर्च, जायफल र नुन थप्छौं।
हामी बिग्रियो Seconds० सेकेन्ड, गति 5। र अब हामी प्रोग्राम Minutes मिनेट, १००º, गति १। (हामीसँग हल्का बेचेमेल छ, यदि छैन भने, अलि बढी दूध थप्नुहोस् र गति4मा केहि सेकेन्ड राख्नुहोस्)।
हामी बेच्मेललाई माथि राख्छौं, ग्रेट गरिएको चीजसँग हिलाउनुहोस् र छिन्नुहोस्।
हामी ओभनमा राख्छौं जबसम्म यो माथि सुनहरा हुँदैन (यो लगभग १०-१-10 मिनेट हुनेछ)।
थप जानकारी -9भरिएको तरकारी व्यञ्जनहरू वर्षभरि रमाइलो गर्न
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, १ घण्टा भन्दा कम, वरोमा रेसिपीहरू, शासन
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » ब्रोकोली र ह्यामको साथ म्याकारोनी
स्वादिष्ट!, म यसलाई ठीक गर्ने प्रयास गर्दछु। चुम्बनहरू
धन्यवाद मारीन! तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भने हेर्नका लागि ...
मलाई मन पर्छ, म पक्का गर्छु ब्रोकली मेरो मनपर्ने तरकारी हो र मेरी छोरीले पनि यसलाई धेरै मनपराउँदछ।
नमस्ते मारिसा, ब्रोकोलीको साथ ठीक भएको भए कती राम्रो भयो! पक्कै तपाईंको छोरी यो मन पर्छ ... पनि हेम र bhachamel को स्पर्श संग ... क्रीमयुक्त ... एक खुशी!
यो धेरै राम्रो देखिन्छ, म यो शनिबारको लागि गर्न जाँदैछु, तर म पक्का छु कि एक सफलता। म तपाईंको पृष्ठमा अंकुश लगाएको छु ...
धन्यवाद Begoña! तपाई यो देख्नुहुनेछ कि यो कति स्वादिष्ट छ, यो पनि बनाउन सजिलो छ कि यो धेरै कृतज्ञ नुस्खा हो। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
तर यो कस्तो देखिन्छ, जुन म ब्रोकोली, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट :-) लाई मन पराउँछु।
कत्ति राम्रो छ तपाईंलाई ब्रोकली मन पर्छ! तर पक्कै तपाईं उदाहरणको लागि फूलगोभी प्रतिस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद!
नमस्कार, म कल्पना गर्छु, जब यस चरणमा म्याकारोनी बनेको छ र तापक्रम १००º मा सेट हुन्छ, ब्रोकली पहिले नै यसको बिन्दुमा हुन्छ, किनकि मलाई लाग्छ कि यो मैले भेरोमा कन्टेनरमा यसलाई सधैं भेरोमासँगै सेट गरिरहेको छु। तापमान, र १००º को साथ यो सहि हुँदैन। म स्पष्टीकरण को सराहना गर्दछु, राम्रोसंग मलाई थाहा छैन यदि मैले आफैंले राम्रोसँग व्याख्या गरेको छु कि ... म यो अवसर तपाईको ब्लागमा बधाई दिन लिन्छु ...
हेलो एन्जी, यस अवस्थामा मैले पास्ता खाना पकाउनको लागि आवश्यक पुस्तकमा निर्देशनहरू पालना गरेको छु। यस नुस्खाको लागि यो उत्तम छ, किनकि हामी ब्रोकोली पूर्ण रूपमा चासोमा चासो राख्दैनौं। बरु हामी चाहान्छौं कि यो अल डेन्टेट होस् किनकि यो चुलोमा जान्छ र पकाउने काम समाप्त हुन्छ। तर निस्सन्देह, सबै चीज स्वादको कुरा हो। यदि तपाईंको मामलामा तपाईंलाई यो अधिक pasadito मनपर्दछ, जब तपाईं पास्ता हटाउनुहुन्छ, तपाईं ब्रोकोलीलाई केहि मिनेटको लागि भेरोमा तापमानमा छोड्न सक्नुहुनेछ जबसम्म यो तपाईंको रुचि छैन। हामीलाई पछ्याउनु भएकोमा धन्यवाद!
तपाईको व्यंजनहरु को लागी धेरै धन्यबाद! यो मैले आज गरेको छु र हामीलाई यो धेरै मनपर्‍यो। स्वादिष्ट धन्यबाद। हामीले म्याकारोनीको एक राम्रो स्रोत पाएका छौं (हामी दुई वयस्क र एक केटी)। एउटा प्रश्न, बाँकी भोली खानको लागि (हामी तीन जनालाई फेरि दिन्छ) यसलाई फ्रिजबाट बाहिर निकालेर ओभरमा सिधा ताप्न राख्नुहुन्छ? Bechamel यो एक धेरै राम्रो स्पर्श दिन्छ। मलाई थाहा थिएन कति जायफल थप्न सक्छु, तर मलाई लाग्छ म अन्तमा ठीक थिएँ।
म तपाइँलाई तपाइँको व्यञ्जनहरू र तपाइँको काम मा बधाई छ। फेरि पनि धन्यबाद।
नमस्कार जावी! तपाईको टिप्पणी को लागी धेरै धन्यबाद। म तपाईंलाई खुसी छु खुशी छु। म सँधै बढी बनाउँछु, यद्यपि घरमा हामी दुई जना मात्र थियौं, तर हामी प्राय: ट्युपरवेयर काम गर्दछौं। त्यसोभए, तपाईले के छोड्नु भएको छ, तपाईसँग दुई विकल्पहरू छन्: यसलाई माइक्रोवेभ वा ओभनमा तताउनुहोस्। दुबै विकल्पका लागि म दुधको एक छिटो थप्छु, किनकि बाचेमल पर्याप्त गाढा हुनेछ र ती पहिलो पटक जस्तो रसदार हुनेछैनन्। एकचोटि तपाईंले तिनीहरूलाई तातो पार्नुभयो, तिनीहरूलाई राम्रोसँग हलचल गर्नुहोस् ताकि दूध पास्तासँग राम्रोसँग समाहित हुनेछ। यस तरिकाले, दुधले béchamel को बनावट सुधार गर्दछ। तपाईं मलाई भन्नुहुनेछ !!
आज मैले उनीहरूलाई खानेकुरा बनाएको छु र ती धेरै राम्रा छन्!… केहि भिन्नताहरू: मँ मकारोनी नभएकोले मैले उनीहरूमा रंगीन घुमाउरा हालेको छु, 400०० जीआर पास्ताको सट्टामा, मैले झन्डै put०० राखेको छु किनकि हामीमध्ये दुई जना छन्। खानको लागि, र béchamel मैले तपाईंले स indicate्केत गरेको आधा गरेको छु ...
मेरो श्रीमानले मलाई अर्को पटक ब्रोकाउलीको टुक्रालाई सानो बनाउन भन्नुहुन्छ किनभने उसलाई यो धेरै मन पर्दैन (राम्रो छ, तर मैले उसलाई केही तरकारीहरू खान लगाउन व्यवस्थित गरेको छु ...)। जे होस्, घरमा नखाने मेरो लगभग 11 वर्षको छोरो, "यो मन पर्यो", उसले यसलाई बेलुकाको खानाको लागि तताएको पनि चाहँदैन थियो ... र त्यहाँ अझै थोरै बाँकी छ जुन उसले मलाई रिजर्भ गर्न चाहन्छ। भोलि ... मेरो बच्चाले गर्छ कसलाई थाहा छ !!
धन्यवाद र बधाई छ ... !!
तर हे एन्जी, कस्तो सफलता। म साँच्चिकै खुसी छु। र, यदि तपाईंले साना बुकेहरू काट्नु भयो भने, तपाईंको छोराले उनीहरूलाई जस्तो मनपर्नेछ र तपाईंको पतिले उनीहरूलाई बढी मनपर्नेछ, त्यसैले तपाईंसँग पहिले नै समाधान छ lol। तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद!
आज मलाई के खाना पकाउने थाहा थिएन र मैले यो नुस्खा देखे र सबैले यसलाई मन पराए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट दोहोर्याउन,
म इस्तेफानिया कती खुसी छु! यो सत्य हो कि कहिलेकाँही हामीले के पकाउने भनेर जान्दैनौं र हामीले केहि फरक र के गर्न छिटो फेला पार्नु पर्छ। तपाईलाई मन परेकोमा म साँच्चिकै खुशी छु। लेख्न को लागी धन्यवाद! अभिवादन।
यो कस्तो देखिन्छ! अब म यो गर्छु !! एक श doubt्का, म्याक्रोनी बनाउनको लागि, बायाँ मोड छ, दायाँ? धन्यवाद !!!
नमस्ते लौरा, हो, म बायाँ मोडियो writing लेख्न को लागी धन्यवाद !!
धेरै सजिलो माछा सूप